Oovimba be-UNISWAP - Iphepha 2 le-5
Ukungaguquguquki (UNIUSD) Ixabiso liBangelwe ngaphakathi kweedola ezingama-27 kunye namaNqanaba angama-21
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Okthobha 21
Ukuba kungakho ukwahlukana kwinqanaba lama- $ 27 lokumelana, ixabiso linokunyuka liye kuma-30 kunye nama-37 angama-27. Xa iinkunzi zeenkomo zingenakungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 21, i-Uniswap inokuqhubeka nokuhamba ngokuhamba okanye kunokubakho ukubuyela umva kwinqanaba lokuxhasa kwi $ 17, $ 14 nakwi- $ XNUMX.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Kwakungabikho ntshukumo ibalulekileyo kwintengiso ye-Uniswap kwiveki ephelileyo. Ingqekembe igcina urhwebo lwayo ngaphakathi kwenqanaba lama- $ 27 kwinqanaba lokumelana kunye nenqanaba lenkxaso lama- $ 21. Ukuhamba okujikelezayo kunokuqhubeka kude kube lixabiso liphume nokuba kusezantsi okanye emantla. Uxinzelelo lweenkunzi luyakhula kwaye kunokubakho ukuphuma okuphuculweyo kwinqanaba lama- $ 27 lokumelana.
Ukungaguquguquki kuthengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuqhubeka kokuhamba ngenkuthalo. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uhlala ungaphezulu komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Ukuba kungakho ukwahlukana kwinqanaba lama- $ 27 lokumelana, ixabiso linokunyuka liye kuma-30 kunye nama-37 angama-27. Xa iinkunzi zeenkomo zingenakungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 21, i-Uniswap inokuqhubeka nokuhamba ngokuhamba okanye kunokubakho ukubuyela umva kwinqanaba lokuxhasa kwi $ 17, $ 14 nakwi- $ XNUMX.
Ukungaguquguquki kukuhamba okuhamba kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lokumelana ne- $ 27 ibambe kwaye iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukutyhala i-Crypto ngaphezulu kwenqanaba. Ngendlela efanayo, iibhere azikwazanga ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwenqanaba lenkxaso le- $ 21 njengobungqina benqanaba elikhankanyiweyo elinamandla kunamandla eebhere. Ixabiso lisukela kwinqanaba lokumelana kunye nenqanaba lenkxaso elikhankanyiweyo.
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngeenxa zonke zexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikumanqanaba angama-60 agobileyo ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ukungaguquguquki (i-UNIUSD) Ixabiso liQokelela uMdlandla wokuPhula iNqanaba lama- $ 26 lokuXhathisa
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Okthobha 14
Kwimeko apho kukho ukwahlukana kwinqanaba lama- $ 26 lokumelana, ixabiso linokunyuka liye kuma- $ 30 kunye nama- $ 37 amanqanaba okumelana. Xa iinkunzi zeenkomo zingakwazanga ukwahlula inqanaba lokumelana ne-26 yeedola, ukuqhubeka kokuthengiswa kweemarike kunokwenzeka okanye kuya kubakho ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Kwiveki ephelileyo, urhwebo lwengqekembe ngaphakathi kwinqanaba lama- $ 26 lokumelana kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 21. Abathengi nabathengisi basemfazweni. Kude kube kuphume ixabiso nokuba kusezantsi okanye emantla ukunyakaza okuqhubekekayo kunokuqhubeka. Nangona kunjalo, uxinzelelo lweenkunzi luyakhula kwaye kukho ukutyekela ekuphumeni kwe-bullish kwinqanaba le-ressitance ye- $ 26.
Ungatshintshi itshathi yemihla ngemihla, nge-14 ka-Okthobha
Ukungaguquguquki kuyaqhubeka nokuthengisa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuqhubeka kokuhamba ngenkuthalo. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) ungaphezulu komndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Kwimeko apho kukho ukwahlukana kwinqanaba lama- $ 26 lokumelana, ixabiso linokunyuka liye kuma- $ 30 kunye nama- $ 37 amanqanaba okumelana. Xa iinkunzi zeenkomo zingakwazanga ukwahlula inqanaba lokumelana ne-26 yeedola, ukuqhubeka kokuthengiswa kweemarike kunokwenzeka okanye kuya kubakho ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14.
Ukungatshintshi kukunyusa kwitshathi yeeyure ezi-4. I-Crypto yayidibanisa ukujikeleza indawo engama-26 yeedola kwiveki ephelileyo. Abathengisi baqala ukoyisa kwaye bayityhale le ngqekembe iye ngasezantsi kwe- $ 21. Abathengi bachasene nentshukumo ye-bearish kunye nokwenziwa kwekhandlela lokunyusa ikhandlela ngaphambi kokuba lifikelele kumanqaku kunye nokunyuka kwexabiso ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 26.
Ungatshintshi itshathi yeeyure ezi-4, Okthobha 14
Ukungaguquguquki kugcina ukuthengisa kwayo ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA emva kokuwela ezi zimbini. Ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-50 agobileyo ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ukungatshintshi (i-UNIUSD) Ixabiso lifumana inkxaso kwi $ 22, lijolise kwi- $ 31
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Septemba 16
Ixabiso linokufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 31, ukuba ayibambanga, ixabiso linokunyuka liye kuma- $ 34 nakwi- $ 39 kwinqanaba lexabiso. Ukuba inqanaba lokuchasana libambe i- $ 31, ixabiso linokuhla kwinqanaba kwaye lijongane nenqanaba lenkxaso kwi $ 44, $ 15, nakwi- $ 39.
Ukungatshintshiswanga kukunyusa ixesha elide. Umfutho we-bearish owaqala ngoSeptemba 02 uphazanyiswe ziinkunzi ngoSeptemba 12 xa ifikelela kwinqanaba lenkxaso kwi-22. Ingqekembe idibanisa iveki. Ikhandlela elomeleleyo lemihla ngemihla elivelayo eliqhubela phambili amaxabiso ngaphezulu kwenqanaba lokumelana namandla. Ixabiso liya kwinqanaba lokumelana ne- $ 31.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoSeptemba 16
Ukungatshintshiswanga kukurhweba ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ebonisa ukukhula ngamandla. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uwela umndilili wokuhamba kancinci (amaxesha angama-21 e-EMA) ujonge phezulu njengophawu lwentengiso. Ixabiso linokufikelela kwinqanaba lokumelana ne- $ 31, ukuba ayibambanga, ixabiso linokunyuka liye kuma- $ 34 nakwi- $ 39 kwinqanaba lexabiso. Ukuba inqanaba lokuchasana libambe i- $ 31, ixabiso linokuhla kwinqanaba kwaye lijongane nenqanaba lenkxaso kwi $ 44, $ 15, nakwi- $ 39.
Ukungatshintshi kukunyusa kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba lenkxaso kwi-22 ibambe kwaye ixabiso liyehla emva kokuvavanya kathathu. Iinkunzi ziye zafumana amandla ngakumbi kwaye zityhala ingqekembe kwicala elingasentla, zaphula amanqanaba okumelana namandla. Ixabiso ngoku lijolise kwinqanaba lokumelana ne- $ 31.
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngaphezulu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-70 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
Ukungatshintshi (UNIUSD) amaxabiso ahlawula amaNqanaba angama-30 exesha lokuncipha, ukuhla ukuya kwinqanaba le- $ 14
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga-Septemba 09
Ukuba ixabiso linokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 22 kunye nekhandlela lemihla ngemihla elingaphantsi kwayo, inokuhla iye kufikelela kumanqanaba enkxaso ye- $ 15 kunye ne- $ 12. Ukusilela ukophula inqanaba lama- $ 22 kungakhokelela ekuqhubekekeni kwendlela yokuqhubela phambili ukuya kumanqanaba okumelana ne- $ 26, $ 30 kunye ne- $ 37.
Ukungatshintshiswanga kukungagungqi kwimbonakalo yexesha elide. Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, ingqekembe ibiphantsi kolawulo lwabathengi. Abathengi batyhale ingqekembe ukuba bavavanye inqanaba lokumelana ne- $ 30 kabini. Umnxeba wokuqala wawungo-Agasti 13, ubuyela umva ukuze uphinde uzame inqanaba lenkxaso le- $ 26. Iinkunzi bezikhusela inqanaba elikhankanyiweyo kwaye ziphinde zavavanya inqanaba lokumelana ne- $ 30 okwesibini. Isenzo sexabiso senze iipateni ezimbini zetshathi ephezulu kwaye ixabiso ngoku liyehla.
Itshathi yemihla ngemihla ye-UNIUSD, ngoSeptemba 09
Ukungatshintshiswanga kukurhweba ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA nto leyo ebonisa amandla e-bearish. Umndilili wokuhamba ngokukhawuleza (ama-9 amaxesha e-EMA) uwela umndilili wokuhamba kancinci (ama-21 amaxesha e-EMA) njengophawu lwendlela ye-bearish. Ukuba ixabiso linokungena kwinqanaba lokuxhasa le- $ 22 kunye nekhandlela lemihla ngemihla elingaphantsi kwayo, inokuhla iye kufikelela kumanqanaba enkxaso ye- $ 15 kunye ne- $ 12. Ukusilela ukophula inqanaba lama- $ 22 kungakhokelela ekuqhubekekeni kwendlela yokuqhubela phambili ukuya kumanqanaba okumelana ne- $ 26, $ 30 kunye ne- $ 37. Isalathiso saMandla esiNxulumene siKhomba kumanqanaba angama-40 abonisa umqondiso wokuthenga onokuba sisitshixo.
Ukungaguquguquki kungumda ongena kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukukhula okuqhubayo kuyaqhubeka kwinqanaba lokumelana ne- $ 30. Isenzo sexabiso sakha iipateni ezimbini zetshathi ephezulu. Inqanaba lokumelana ne-30 yeedola kubonakala ngathi liyinqanaba elibalulekileyo kwi-Uniswap. Ixabiso ngoku liyancipha kwaye kuvavanywa inqanaba lenkxaso le- $ 21.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-UNIUSD, ngoSeptemba 09
Ukungatshintshiswanga kuthengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esi-14 sikumanqanaba angama-40 okugoba ukubonisa uphawu lokuthenga.
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 5 abaDala izithuba →